UKUZIVA = EyoQobo Ndiva + Iintsimbi zeFilm
I-FEELM inomdla wokuphucula amava okutshaya abantu abadala ngeetekhnoloji ezintsha kunye nezixhobo. Ukudibanisa iFilimu yentsimbi kunye noMqhubi weCeramic, obu buchwephesha botshintsho luphumeleleyo kwizixhobo zemveli kunye neNzululwazi yoLwakhiwo, ezimele umda omtsha kushishino lweatomization.
I-FEELM ihambelana ngokugqibeleleyo neTekhnoloji yokuVumba iFilimu kwiNkqubo evaliweyo yePod, izisa incasa enkulu kunye namava angaqhelekanga okuba nomdla kubantu abathanda i-e-cigarette, kunye nokutshaya okwenyani kwabo batshayayo ngabantu abadala.
Itekhnoloji ye-FEELM yaqulunqwa ngo-2016 yi-SMOORE International Holdings Limited (iKhowudi yeSitokhwe: 6969.HK), inkampani yabazali yeVAPORESSO, CCELL kunye neMETEX.
Ukwabelana ngeNtengiso yeHlabathi
• ISMOORE yasekwa
Sisebenzisane no-NJOY, sungula i-KING
Idityaniswe neAltria, yakhiwa iMarkTen kuphela
• IZiko elikhokelayo elihamba phambili kwi-R & D, lijolise kwiThekhnoloji yokuFudumeza iCeramic
• Kuphuhliswe isizukulwana sokuqala seCeramic Coil T28
• Ukusekwa SMOORE Changsha Research Institute
• Kwaziswa iT29 Metallic Film Ceramic Coil
• Ukusekwa kweZiko loPhando laseShenzhen
Ubambisene no-RJ Reynolds, wasungula uVuse Alto
Isebenzisana neBAT, yaphehlelela iVype ePod
Ubambisene neRELX, wasungula iRELX Classic e China
• Iphehlelelwe NJOY ACE
• Ihlabathi lipapashe uphawu lweTekhnoloji yokuFudumeza i-FEELM, iphumelele iimbasa zeGolide
• Umthamo wentengiso ye-FEELM ngaphakathi kweepods ugqithe kwi-100 yezigidi
• Ikhutshwe "FEELM ngaphakathi" kwiNtengiso yeTekhnoloji yoQinisekiso lwentengiso
• Yakhelwe ngokubambisana i-E-cig yeFektri ekhethekileyo yeHlabathi kunye neRELX
• Ukuveliswa kwamandla e-FEELM ngaphakathi kwimidumba kugqithe kwisiqwenga se-1 sezigidigidi
I-Ceramic Heating Technology ifumene i-1 China Patent Excellence Award kwishishini
• UPhononongo lweZIBONELELO kunye neZiko loVavanyo luphumelele uvavanyo lovavanyo lwe-CNAS
• Ukuseka iZiko loPhando laseTangshan
• I-SMOORE idweliswe kwi-HKEX (ikhowudi yesitokhwe: 6969.HK)
Ukuphumelela i-IF Design Award 2020
• Ifake isicelo samalungelo awodwa omenzi wechiza angaphezu kwe-1600
Eyasungulwa ngo-2006, i-SMOORE International Holdings Limited yiShishini leSizwe eliPhakamileyo kunye nobunkokeli obalaseleyo behlabathi ekuboneleleni ngezisombululo ze-atomization technology. Ikhethekile kwi-teknoloji ye-atomization kunye nophuhliso, ukuvelisa kunye nokuthengiswa kwee-ceramic conductor.
ISIMANTSI sigqala ukubaluleka okukhulu kwiR & D kunye nezinto ezintsha. Ngamalungu angundoqo aphumelele kwiiyunivesithi eziphezulu njengeGeorgia Institute of Technology, iYunivesithi yasePurdue, iYunivesithi yaseTsinghua, kunye neTshayina Academy yezeNzululwazi, i-SMOORE ngoku inamalungelo awodwa omenzi wechiza angaphezu kwe-1600 kwihlabathi liphela, egubungela inani lamacandelo afana nabaqhubi beekheram kunye neeatomizers zombane.
Ngombulelo kubuchwephesha be-atomization technology, iimveliso ze-SMOORE zifumene i-WM, RBA, EICC, BSCI, GMP, cGMP kunye nezatifikethi ze-TUV kwaye zithunyelwe kumazwe angaphezu kwama-50 nakwiindawo kwihlabathi liphela. Ukuqhubeka nokubonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nenkonzo, ISMOORE iyeyona ndawo iphambili yetekhnoloji yeatomization, eyamkelweyo ngokubanzi kunye neyolwayo ngabasebenzisi bokugqibela.
Ngenxa yetekhnoloji ye-R & D ephambili, amandla okuvelisa anamandla, ipotifoliyo yemveliso ebanzi kunye neziseko zabathengi ezahlukeneyo, ngokukaFrost & Sullivan, USMOORE wayengoyena mvelisi wesixhobo sikhulu somhlaba ngokwemali yengeniso, esenza i-16.5% yesabelo sonke semarike, Ngo-2019.
Iicigarete zobushushu, Isigarethi soLwelo esiTywala, Ipakethe yeBlister ye-cigarette, Ukutshaya enye indlela, Epen, Newport E umdiza,